Egwuregwu ejiji 8 kachasị mma maka gam akporo | Gam akporosis
Na Play Store enwere ọtụtụ igwuri egwu nke ụdị dị iche iche, ma maka ụmụ nwoke na ụmụ agbọghọ, yana maka ndị okenye. Otu n'ime edemede ndị kachasị ewu ewu nwere egwuregwu eji ejiji, ọ bụ ya mere anyị ji ewetara gị ọkwa a.
Na nchịkọta a, anyị ga-edepụta ma kọwaa gị egwuregwu kachasị mma maka gam akporo, nke ezubere maka ụmụ agbọghọ na ụmụ agbọghọ. Egwuregwu niile ị ga-ahụ n'okpuru bụ n'efu, ọ bara uru ịkọba, yana ịbụ otu n'ime ndị kachasị ewu ewu ma budata na ụdị ha.
1 Chibi Dolls - Onye Na-eme Avatar
2 Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu efu
3 Candylocks Hair Salon - yledị Cotton Candy Hair
4 Fluvsies - Nabata anụ ụlọ mara mma ma dịkwa mma
5 Zyzụ ahịa Crazy Na Girlsmụaka Ọgaranya - Egwuregwu Egwuregwu
6 Jungle Animal Hair Salon 2 - Mma lonlọ Mmanya
7 Ejiji Covet: Egwuregwu Egwuregwu
8 Akụkọ Hollywood: Icon Fashion
Chibi Dolls - Onye Na-eme Avatar
E nweghị ụzọ ka mma isi malite a mkpokọta karịa na otu nke kasị ebudatara na-ewu ewu uwe elu egwuregwu n'ihi na ụmụ agbọghọ na Google Play Store maka gam akporo. Ma ọ bụ na Chibi Dolls - Avatar Onye Okike bụ otu n'ime ụdị zuru oke nke ụdị ya, maka ịbụ nke ahụ -enye gị ohere iji hazie gị họọrọ agwa na ọ fọrọ nke nta ọ bụla ekike na ngwa pụrụ ichetụ n'echiche.
Nwere ike ịhọrọ site n'ọtụtụ akụkụ nke omume ahụ, site na ntutu na anụ na agba anya, iji mee ka ọ dị ka gị ma ọ bụ onye ọ bụla ọzọ. Na mgbakwunye, enwere ike ịhazi ọnụ na nku anya.
Maka ndị na-ere ahịa, enwekwara ohere ịgbakwunye ntụ ntụ polka, họrọ agba nke anya, gbakwunye agba na agba na nkọwa ndị ọzọ na njirimara ihu. E nwekwara nnukwu ego iji họrọ, yana agwa ndị a nwere ike ịme anime avatars.
Akụkụ ndị ọzọ nke a uwe elu egwuregwu na-agụnye anụ ụlọ maka avatar gị, ọtụtụ akpụkpọ ụkwụ nwere ụdị dị iche iche na ọnọdụ maka ya. N'ikpeazụ, ị nwere ike ịhọrọ avata gị ka ị bulite ha na netwọkụ mmekọrịta na mgbasa ozi ndị ọzọ, ma ọ bụ kesaa ha site na ndị a.
Chibi Dolls - Mepụta Avatar
Developer: Egwuregwu Egwuregwu Anime
Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu efu
Free Fashion Games bụ ihe ọzọ na-akpali nnọọ mmasị onye na-abịa na ọtụtụ ọrụ ma na nhọrọ hazie gị nkwojiaka. N'ihe karịrị uwe 1.000, uwe, ngwa na ihe ndị ọzọ, ị nwere ike ịme ihe ọ bụla iji mee ka avatar gị nabata ụdị ejiji gị na ọdịdị gị., yabụ ị nwere ike bulite ya na netwọkụ mmekọrịta gị dịka foto profaịlụ ma kesara ya ndị enyi gị, ndị ezinụlọ na ndị maara.
Ọ bụ otu n'ime egwuregwu na-atọ ụtọ maka ndị hụrụ ejiji n'anya, dịka o nwere ọnụọgụ na-enweghị ngwụcha nke nhọrọ nhazi nke gụnyere nhọrọ nke uwe, uwe na uwe n'ozuzu, yana ngwa na ihe ndị ọzọ. N'ezie, ọ na - enye gị ohere ịhọrọ n'etiti njirimara ahụ ka nwa bebi gị wee nwee ụdị na ọdịdị ịchọrọ.
Ọbụghị naanị na ị nwere ike iji ejiji ma hazie agwa gị etu ịchọrọ, mana ị nwere ike Nwekwara ike ịghọ onye mmebe ejiji ma họrọ site na ngwa dịka ọla dị oke ọnụ na okomoko, akpa, obere akpa, ịchafụ, ịchafụ na ndị ọzọ. O nwekwara ọtụtụ oge ị ga-eji ejiji akwa bebi gị, dị ka agbamakwụkwọ, ngụsị akwụkwọ, ihe omume gala na ndị ọzọ.
Developer: Egwuregwu ụmụ agbọghọ na-eji ejiji
Candylocks Hair Salon - yledị Cotton Candy Hair
Ọ bụrụ na ihe ị na-achọ bụ uwe na hazie a katuunu avatar, egwuregwu a bụ maka gị. You ga-enwe ike iji ejiji dịka ịchọrọ ma nye nwa bebi gị katoon na anya nwere akwa akwa na ngwa dị njikere ịhọrọ ma debe ya ka ọ dị ka ị ga-eche.
Uwe ndị dị na katalọgụ dị n'ime egwuregwu egwuregwu a bụ ụfọdụ n'ime ihe na-atọ ọchị. N'ebe a, ị nwekwara ike inweta ọtụtụ akpụkpọ ụkwụ ... ọbụna ndị scooters! Na iji mee ka ị dị ndụ ma ọ bụ na-emegharị ahụ, ọ na-enye nsogbu ịma aka kwa izu nke gụnyere idobe nwa bebi gị dị ka ihe ịma aka dị iche iche gosipụtara, nke ị ga-enweta ụgwọ ọrụ n'ime egwuregwu ahụ ị nwere ike iji mee ka njirimara gị gbanwee.
Nwere ike ịhọrọ n'etiti ise dị iche iche nwanyi odide; ị nwere ụbọchị ọmụmụ Kate, Kiwi Kara, Betty Berry, Cotton Sandy na Uni Cami. Ha niile dị iche iche ma nwee ụdị ịhụnanya nwoke na nwanyị. Na mgbakwunye, nke ọ bụla na-abịa n'ụdị ndabara ị nwere ike ịgbanwe na mmasị gị.
Ọbụghị naanị na ị ga - enwe ike iwepụta mmuo fashionista gị na egwuregwu a, kamakwa I nwekwara ike ikpughere nkà gị na ịkpụzi ntutu isi ebe ọ bụ na ị nwere ike ịmepụta njirisi na edozi isi nke ịchọrọ kachasị ka ụmụ bebi gị dị iche n'oge ọ bụla, na narị narị edozi isi dị na ị nwere ike ịgbanwe kpamkpam. Nwekwara ike ime ka ihe odide gị dị ka uche gị si dị, ka ọdịdị ha niile kwekọọ ka i chere.
Fluvsies - Nabata anụ ụlọ mara mma ma dịkwa mma
Ee ọ bụ n'ezie anụ ụlọ, ma ihe na-adọrọ mmasị banyere nke a bụ na, na mgbakwunye na ilekọta na ịzụlite ha, ị nwere ike ihicha ha dịka masịrị gị n'ihi na ọ nwere ime ụlọ ejiji. Jiri uwe dị iche iche na uwe ị ga-ahọrọ họrọ, jiri ọtụtụ ngwa mee ka anụ ụlọ gị yie ihe na-atọ ọchị ma dịrị njikere maka oge ọ bụla.
Tinyere ihe ndi ozo, Fluvsies na-abịa na Cafe maka anụ ụlọ; achọpụta ọtụtụ ebe ị nwere ike were anụ ụlọ gị ma sie nri dị ụtọ. Mepee ntụziaka ọhụrụ ka ị na-esi nri ha ma kwadebe efere kachasị mma maka anụ ụlọ gị.
N'aka nke ozo, kporie otutu egwuru-egwu egwuru-egwu ndi ichotara na egwuregwu a ma mee anu ulo gi. Na-elekọta ha anya nke ọma, na-enye ha nri ma na-eso ha ekerịta ka ha nwee ọ funụ ka ha na-etolite.
Zyzụ ahịa Crazy Na Girlsmụaka Ọgaranya - Egwuregwu Egwuregwu
Na egwuregwu a ị nwere ike mezuo echiche gị nke ịbụ nwa agbọghọ nde. Ma ọ bụ na o nwere ego zuru oke na egwuregwu ahụ iji mezuo ihe ọ bụla, ma enwela mgbagwoju anya! Shoppingzụ ụmụ Crazy na ụmụ agbọghọ bara ọgaranya anaghị akwado ịkwụ ụgwọ ezigbo ego. A na-edozi ihe niile n'ime egwuregwu ahụ, ma enwere otutu ego. Egwuregwu ahụ bụ n'efu!
Nweta, họrọ ma zụta ọnụ ọgụgụ na-enweghị ngwụcha nke uwe, uwe, ngwa na ihe ndị ọzọ iji yikwasị ụmụ agbọghọ 6 ahụ dị na egwuregwu ahụ, ha niile dị iche na ibe ha, nwere agba akpụkpọ na ọdịdị dị iche iche ị nwere ike ịgbanwe na ihe niile ị nwere ike ịzụta ha iji mee ka ha dị ka gị ma ọ bụ dị ka nde mmadụ a ma ama ịchọrọ nrọ.
Na egwuregwu a, ịzụ ahịa ịkpa ike abụghị nsogbu, mmefu ụlọ ntutu ntutu dị oke ọnụ. I nwere ego iji mefuo ka echi!
Ịzụ ahịa Ejiji - Egwuregwu Ụmụ nwanyị
Jungle Animal Hair Salon 2 - Mma lonlọ Mmanya
Nke a bụ egwuregwu ọzọ eji ejiji nke anaghị elekwasị anya na avatar nke mmadụ, kama na anụmanụ. Nwere ike ịnwe anụmanụ anọ mara mma dị njikere ịnwe n'aka gị ka ị wee nwee ike ịhụ ha ma mezie dịka ịchọrọ.
Have nwere elephant Sarah, onye hụrụ osimiri n'anya na ihe ọ bụla metụtara ya; Mona Maya, onye hụrụ oke ọhịa n'anya na ọ bụ ihe ịma aka ime ya ka ọ dị mma n'anya n'ihi na ọ dị oke njọ; na zebra Gizelle, onye kachasị na-achụ nwoke na nwanyị, n'ihi ịbụ onye na-adị njikere mgbe niile ịnwale uwe ọhụrụ na uwe mara mma; agụ Amy, onye hụrụ ọmarịcha ihe ịchọ mma na ịkwa ụta na ntutu isi; na pink toucan, nke kachasị mma na ihe niile.
Ejiji Covet: Egwuregwu Egwuregwu
Eziokwu ahụ bụ na uwe ejiji a dị n'ọdụ ikpeazụ apụtaghị na ọ bụ otu n'ime egwuru egwu kachasị egwu na ụdị ewu ewu ya. O nwere ihe karịrị nde 10 nke nbudata na-egosi ya, yana ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 750 puku kwuru na ọkwa na-enye ya ezigbo akara 4-kpakpando na Playlọ Ahịa Google.
Na egwuregwu a ị ga-enwe ike mezuo nrọ gị nke eccentric fashionista. Yiri ụmụ bebi gị uwe na uwe sitere na ụdị ndị a ma ama dịka Calvin Klein, Vince Camuto na Rachel Zoe, ma mee ka ha dị ka ọ dịtụbeghị mbụ. Ihe ga - agba gị ume ịpụ ma họrọ n’etiti uwe kachasị mma bụ nsogbu dị n’ime egwuregwu ahụ, ebe ị ga - ahụ foto, ihe omume nke ọkwa na kapeeti uhie, dị ka a ga - asị na ị bụ onye ama ama. E ị ga-enwu gbaa!
Ọ bụghị naanị na ị ga-ahụ uwe na-adọrọ mmasị, kamakwa Uwe na ngwa na-enweghị oke ị nwere ike ijikọ iji nye nwa bebi gị ụdị nrọ gị. Ihe ọzọ dị mma maka egwuregwu a bụ na uwe na ngwa niile ị nwetara na katalọgụ egwuregwu dị na ndụ n'ezie; nwere njikọ weebụsaịtị ebe ị nwere ike ile anya wee nye iwu ma zụta ha ka ha eyi akwa kaboodu gị na ndụ n'ezie.
Akụkọ Hollywood: Icon Fashion
Akụkọ Hollywood bụ egwuregwu ejiji maka gam akporo nke ị ga-enwe ike ikwere na ị ga - abụ kpakpando n'ụwa na ụlọ ọrụ ihe nkiri kachasị ukwuu n'ụwa, ma yi uwe mara mma na uwe iji maa mma ma mara mma na uhie kapeeti.
Họrọ site na ọtụtụ ngwa, uwe dị iche iche na ihe ndị ọzọ iji bụrụ otu n'ime ihe kachasị mma na ememme gala na usoro ọmụmụ. I nwekwara ike hazie avatar gị ka ọ dị gị ma ọ bụ kpakpando ihe nkiri ahụ masịrị gị nke ukwuu. Gbanwee agba akpụkpọ ahụ na ọdịdị ahụ ya na nhọrọ nhọrọ dịgasị iche iche. Ọzọkwa gaa obodo na ebe ndị ọzọ karịa Hollywood, dị ka Beverly Hills, Las Vegas na Manhattan, ma bụrụ ebe etiti anya.
Hollywood Story® akara ngosi
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » 8 egwuregwu kacha mma maka gam akporo
Xiaomi Mi 11: Nyocha, njirimara na ule igwefoto
Ngwa ngwa agbamakwụkwọ asaa kacha mma maka gam akporo